ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုစွဲ - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်
ဆယ်ကျော်သက်အွန်လိုင်း Porn စွဲ
by အမ်း Engelland, MD
ကျွန်ုပ်၏ Inbox ထဲသို့နေ့စဉ် ၀ င်ရောက်သောအီးမေးလ်များစွာနှင့်ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်မျှော်လင့်ထားသည့်အချို့သည်ကျွန်ုပ်မှတဆင့်ကျွန်ုပ်ပိုင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Listserve မှဖြစ်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးပညာသို့မဟုတ် SAHM များအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း.
ယနေ့ခေတ်တွင်ဆယ်ကျော်သက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းခြင်းများနှင့် ပါတ်သက်၍ တက်ကြွ။ နှိုးဆွသောဆွေးနွေးမှုများရှိသည်။ မကြာသေးမီကသူမပြောခဲ့သည့်အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ်လူငယ်တစ် ဦး အကြောင်းရေးသားခဲ့သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး မှပေးပို့သောပထမဆုံးအီးမေးလ်ဖြင့်၎င်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ “ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုသည်ကျွန်ုပ်၏လူငယ်မျိုးဆက်များအတွက်ဘေးဒဏ်ဖြစ်သည်။ ”
သူကသူ၏အွန်လိုင်းစွဲလမ်းမှုနှင့်စွဲလမ်းမှု၊ သူခံစားခဲ့ရသောအထီးကျန်မှုနှင့်အထီးကျန်မှုနှင့်သူ၏“ ဆက်ဆံရေးမျှော်လင့်ချက်များ” အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသူဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါကြီးထွားလာသည့်ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မိဘများနှင့်လူနာများအားမည်သို့အကြံပေးရမည်နှင့်“ အွန်လိုင်းကြီးထွားခြင်း” မှပေါ်ပေါက်လာသည့်အခြားပြissuesနာများနှင့် ပတ်သက်၍ ခိုင်မာသည့်သုတေသနပြုချက်မရှိသလောက်နည်းပါးသောဤကြီးထွားလာသည့်ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနကောင်းကောင်းမရှိခြင်းသည်ပညာရှင်များ၏တုံ့ပြန်ချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဖြေများရရန်မေးခွန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့နည်းမှန်လမ်းကျမေးသနည်း။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စွဲပါဝင်သည်? ငါတို့ဘယ်လိုတိုင်းတာသလဲ။ ၎င်းကိုဖွင့်ကြည့်လျှင်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
Diagnostic and Statistical Manual (စိတ်ရောဂါကုသမှုဆိုင်ရာသမ္မာကျမ်းစာ) အတွက်စဉ်းစားနေသောဂိမ်းစွဲလမ်းမှုအပေါ်သုတေသနပြုသည့်ကမ္ဘာ၏သုတေသနမှအဖြေအချို့ရှိပါသည်။ သတိပေးဆိုင်းဘုတ်အချို့ဖြစ်နိုင်သည် -
အင်တာနက်ကဂိမ်း / porn နှင့်အတူအဆက်မပြတ်
သည်းခံစိတ်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ ဒါဟာတူညီတဲ့သက်ရောက်မှု / အပျော်အပါးရဖို့ဂိမ်း / ညစ်ညမ်းအတွက်စေ့စပ်အချိန်တိုးမြှင့်ပမာဏဖြုန်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုဆိုလို
ဂိမ်းကစားခြင်း / ညစ်ညမ်းအလေ့အထများကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း
ဝါသနာအတွက်ယခင်အကျိုးစီးပွားအရှုံး, ဖျော်ဖြေရေး, အားကစား
မနှစ်မြို့ဖွယ်စိတ်ခံစားမှုမှလွတ်မြောက်ရန်ဂိမ်း / အားကစားအသုံးပြုခြင်း
အချိန်ပမာဏနှင့် ပတ်သက်. မိသားစု, ကုသနှင့်အခြားသူများဆီသို့လှည့်စား porn sites များပေါ်တွင် / ဂိမ်းသုံးစွဲ
အလုပ်၏ဆုံးရှုံးမှု, ကြားဆက်ဆံရေးကြောင့်ဂိမ်း / ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်း
ဤပြဿနာကိုနားလည်ရန်စတင်အဖွဲ့အစည်းများအကြားပိုပြီးသုတေသနပြုဘို့ကိုခေါ်ပညာရှင်များအကြားလဲလှယ်။ မီဒီယာနှင့်ကလေးကျန်းမာရေးအပေါ်စင်တာ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကျောင်းဟားဗတ်ကျောင်းမှာအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်မီဒီယာများ၏ကလေးကျန်းမာရေးအပေါ်အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစူးစမ်းလေ့လာမှုများစတင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ AskTheMediatrician အကယ်၍ မိဘများသည်မိမိတို့ကလေး၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်ပါကအကူအညီဖြစ်စေနိုင်သည်။ သံသယဖြစ်ဖွယ်အပြုအမူကိုအလေးအနက်ထားပြီးအခြားနည်းလမ်းဖြင့်ရပ်တန့်ရန်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။